ကျော်သူ နဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ကျော်သူ – လမ်း (နာရေးကူညီမှုအသင်း) ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၅ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအား သပိတ်မှောက်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြနေသည့် ကျောင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်းအဖွဲ့ကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ် (မြင်းခြံ၊ တောင်သာ၊ ပုပ္ပါး၊ ကျောက်ပန်းတောင်း) ခရီးစဉ်တွေကို ကျွန်တော်လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်...
ကျော်သူ – Happy New Year! အခမဲ့ (နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ရန်ကုန်) ဇန်န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ နာရေး လာထား … အခမဲ့ ကျန်းမာရေးလား …...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) – ဟောဒီက … ပဲပြုတ်
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) – ဟောဒီက … ပဲပြုတ် စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၄ ပရဟိတဟူသည် အသင်းအဖွဲ့များ၊ အုပ်စုများနှင့် စုပေါင်း၍ အများအကျိုးအတွက် ထမ်းရွက်ပေးပါ မှ...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) – သတ်ရင်လည်းသေ၊ ထားရင်လည်းနေ စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) သည် အများပြည်သူ လူသားများအတွက် နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊...
ကျော်သူ – ချမ်းသာအောင် လုပ်ကြသူများ
ကျော်သူ – ချမ်းသာအောင် လုပ်ကြသူများ သြဂုတ် ၂၊ ၂၀၁၄ “ဆင်းရဲရင် နှိပ်စက်ကြလိမ့်မယ် … ချမ်းသာအောင်လုပ်ကြ” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကိုလက်ကိုင်ပြုနေ သော ပုဏ္ဍားဘကွန်း ဝတ္ထုကြီးအား ရေးသားခဲ့သူ အဘဆရာကြီး...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) – မာယာများတဲ့ အကယ်ဒမီပွဲ ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၄ ၁၉၅၂ ခုနှစ်က စတင်၍ အနုပညာလောကနှင့် အနုပညာသမားများကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) – နိုင်ငံကိုချစ်ရင် အမှိုက်ကောက်ပါ
နိုင်ငံကိုချစ်ရင် အမှိုက်ကောက်ပါ ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၄ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ နေထိုင်ကြတဲ့ မိခင်ကမ္ဘာကြီးသည် ပျက်သုဉ်းနေသည်ကို ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်နေကြတော့မှာလား ??? နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် ၂ဝ၁၄...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) – နောက်ဆုံးကဗျာဖြင့် နှုတ်ဆက်ခဲ့လေသူ
နောက်ဆုံးကဗျာဖြင့် နှုတ်ဆက်ခဲ့လေသူ ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၄ ဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်သည် ပညာဉာဏ်ကြီးမြင့်သလောက် ဝီရိယကြီးပေသည်။ စိတ်သဘော ထားကြီးမြင်သလောက် နှလုံးသားဖြူစင်မွန်မြတ်သည်။ အလွန်အင်မတန် အလုပ်လုပ်သူ၊...
မန္တလာပရဟိတခြေလှမ်းများ ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၁၄ အသွင်ကူးပြောင်းသို့ စတင်ကြိုးစားနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာမှ စိတ်ဝင်တစားလာ ရောက်လေ့လာမှုများ၊ လည်ပတ်မှုများ၊ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများ တိုးတက်လာနေပြီဖြစ်သည်။ ထို...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) – ထူးခြားလှသည့် ပရဟိတအောင်တော်မူစေတီတော်ကြီး
ထူးခြားလှသည့် ပရဟိတအောင်တော်မူစေတီတော်ကြီး ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မေ ၅၊ ၂၀၁၄ ကျွန်တော်သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အား ဦးစီးဦးဆောင်ပြီး အများပြည်သူလူထု လူ သားအားလုံးတို့ မလွဲမသွေ တွေ့ကြုံခံစားကြသော နာရေး၊...
ဦးမောင်ကောင်း၏ ရင်ဖွင့်သံ ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မေ ၂၊ ၂၀၁၄ ကျွန်တော်ကတော့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ တော်ဝိကျေးရွာ “မေတ္တာရှင်”လူမှု ကူညီရေး အသင်းသား ဦးမောင်ကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့...
Kyaw Thu – ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကြီး
ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကြီး ကျော်သူ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၊ ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ ပြောကိုမပြောချင်ဘူး။ လူတွေအယူသည်းတတ်ပုံများဗျာ။ ကျော်သူတို့ လင်မယားရယ် ဆရာမရယ် ကို နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူကို နေအိမ်၊ ဆေးရုံများမှာ လူနာသတင်းမေးသွားရင် နှာခေါင်းရှုံ့ကြခြင်း၊...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) – သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆန္ဒတော်အား ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆန္ဒတော်အား ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၄ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ယူပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် ပြည်သူ လူထုတို့အား ပထမဦးဆုံး မိန့်ခွန်းပြောကြားမှုကို...
Kyaw Thu – သူများပျော်လို့ မပျော်နိုင်
သူများပျော်လို့ မပျော်နိုင် ကျော်သူ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၊ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၄ “သူများပျော်လို့ မပျော်နိုင်” ဟူသော စကားအတိုင်း ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် မြန်မာရိုးရာအတာ သင်္ကြန်ကာ လတွင် အိမ်တွင်းပုန်း မိန်းမပျိုများ...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) – အခြစ်ကြီးသူကြီးအတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ်
အခြစ်ကြီးသူကြီးအတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ် ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဧပြီ ၆၊ ၂၀၁၄ ၅.၄.၂ဝ၁၄ ရက်နေ့ နံနက် (၁ဝးဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ကျွန်တော်၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ပန်းချီ မင်းကျော်ခိုင်၏ “ကျွန်တော်ခြစ်တဲ့ ပြည်သူ့...
အမေ့အတွက် မဟာအင်အား ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၄ အတာကူးသည့် တန်ခူးလသည် မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ်ကူး ရေကစားကြသော မဟာသင်္ကြန် အချိန်ကာလ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) – မင်္ဂလာပါ သုခအလင်းမျိုးဆက်သစ်
မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၁၄ “မင်္ဂလာပါ ဆရာမ …” “မင်္ဂလာပါ .. ဆရာ” ဟူသည့် ဆရာ/မများအား နှုတ်ဆက်ကြိုဆိုနေသည့် အသံများ ဒီနေ့မနက် (၈းဝဝ) နာရီဝန်းကျင်မှစ၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဝန်းအတွင်း၌...
မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၁၄ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ သုခအလင်း ပညာဒါနကျောင်းဆောင် သစ်အား ၁၇.၃.၂ဝ၁၄ (တနင်္လာနေ့)၊ နံနက် (၉းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်၍ နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာ (ရေး၊ ဖတ်၊ ပြော) သင်တန်းများ၊...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၁၄ (နိုင်ငံတော်အစိုးရထုတ် သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာထည့်ခွင့်မရရှိခဲ့သည့် Popular News Journal ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့...